.. Imtixaanadkii Fasalka 8aad ee Dugsiyadda Dhaxe ee Puntland oo si habsami ah u soo gababoobay dhamaan Gobolada Puntland. – Ministry of Education in Puntland
.. Imtixaanadkii Fasalka 8aad ee Dugsiyadda Dhaxe ee Puntland oo si habsami ah u soo gababoobay dhamaan Gobolada Puntland.
By editor	/ May 24, 2017
23/may/2017- Imtixaanadkii Fasalka 8aad ee Dugsiyadda Dhaxe ee Puntland oo maanta si habsami ah u soo gababoobay , dhaaman Gobolada Puntland waxa ka soo afjarmay imtixaankii fasalka 8aad oo si habsimi uga socday Gobolada Puntland oo dhan.
Ardayda Fasalka 8aad ayaa ah Tirada ugu badan oo sanad walba imtixaanka Punland u fariisata. Tirada fasalka 8aad ayaa garaysa 8,885 Arday oo isku jira Gabdho iyo wiilal.
Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Nugaal Xaashi Xuseen Faarax iyo Kormeeraha 1aad imtixaanka Magalada caasumada ee Garowe Maxamud Maxamed Siciid (Caynsane) Ayaa dhaamaan Xarumaha Kormeer ku tagay iyagoo xaladaha imtixaanka la socday . Dugsiyada sare ee imtixaanka puntland ayaa maalinta khamiista ah soo afjarmaya.
Ardaydaa fasalka 8aad ayaa waxaa u rajaynanaa guul iyo Mustaqbal ifaya.
Madaxa isku xirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare Deeq hurevov